यस्तो जीवनशैली सफलताको सिँढी
काठमाडौँ । मानिस कसरी बाँचिरहेको छ भन्ने कुराले उसको आयुको निर्धारण गर्छ । शरीरमा रोग लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयसमेत ७० प्रतिशत कारण मानिसको जीवनशैलीमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ रहनका लागि व्यवस्थित जीवनशैली आवश्यक हुन्छ । किशोर अवस्थाबाटै यस्तो जीवनशैली अपनाउने बानीको विकास गर्न जरुरी छ । जसका लागि मानिसमा मात्र अठोटको खाँचो हुन्छ ।
डा. अरुणा उप्रेती-जनस्वास्थ्यविज्ञ
काठमाडौं । दैनिक रुपमा पुरुषले खाली पेटमा लसुनको एक केश्रा खाए यसले थुप्रै रोगको उपचारमा मद्दत पुर्याउँछ । लसुनमा एलिसिनजस्ता पौष्टिक तत्व पाइन्छन् जसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई...
दुधको एक थोपाले चियाको पुरै फाइदालाई शुन्य बनाइदिन्छ । के हुन्छ चियामा ? विशेष गरी कालो चियामा प्रशस्तै एण्टि अक्सिडेन्ट र भिटामिन पाइन्छ, यसले रगतमा सुगरको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ, कोष...
काठमाडौं । चिया धेरै नेपालीले पिउने पेय पदार्थमा पर्छ । बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीको चलन नै बनेको छ । कतिपय त चिया नपिई नित्यकर्म गर्न सक्दैनन् । अधिकांश नेपालीले बिहान चिया...
मदिरा पिउँदा चियर्स किन गरिन्छ ? एजेन्सी । मदिरा पिउँदा चियर्स किन गरिन्छ ? थाहा पाउनु भएको छैन भने अब थाहा पाउनुस् । तपाईं पनि पिउनु हुन्छ भने साथीहरुको अगाडि गफ...
एजेन्सी । धेरैजसो स्वास्थ्य जीवनको कुरा गर्दा हामी कस्तो खानपान गर्ने भन्ने विषयमा मात्र चर्चा गर्छौ । सन्तुलित खानपान र व्यायाम नै हामीलाई पर्याप्त लाग्छ, स्वस्थ्य जीवनको लागि । तर, यति...
भुँडी घटाउन रोटी खाने कि भात ?
काठमाडौँ । यदि तपाइँलाई मोटो पनले सताएको छ वा भुँडी लागेर चिन्तित हुनुहनुन्छ भने पक्कै पनि भुँडी घटाउने उपाय खोजिरहनु भएको होला । के भात खाँदा भुँडी बढ्छ ? कतिपयले भुँडी घटाउन भन्दै रोटी...
केरा र दुध एकसाथ नखाने
काठमाडौं । केरा र दुध दुईटैलाई धेरै नै पोषक तत्व भएका खाद्यपदार्थको रुपमा लिने गरिन्छ । दुधलाई प्रोटिनको एकदमै राम्रो स्रोत मानिन्छ भने केरामा पोटासियम, फाइबर र भिटामिन प्रशस्त...